Nhau - Izvo zvakagovaniswa newe nhasi hunhu hwezvipfeko zveArab
Izvo zvirimo zvakagoverwa newe nhasi hunhu hwezvipfeko zveArabhu. Ndeapi machira anopfeka maArabu? Sezvakangoita zvipfeko zvakajairika, marudzi ese emachira aripo, asi mutengo wakasiyana chaizvo. Kune mafekitari muChina ane hunyanzvi mukugadzira hembe dzechiArab, uye zvigadzirwa zvinotengeswa kunyika dzeArabhu, izvo zvinoita mari yakawanda. Ngatitarisei pamwe chete.
Munyika dzechiArab, zvipfeko zvevanhu zvinogona kunzi zvakapfava. Varume vanonyanya kupfeka nguwo chena uye vakadzi vakamonerwa nguwo nhema. Kunyanya munyika dzine mitemo yakasimba yeIslam yakadai seSaudi Arabia, migwagwa iri kwese. Inyika yevarume, vakadzi vachena nevatema.
Vanhu vangafunga kuti nguwo chena dzinopfekwa nevarume vechiArab dzakafanana. Muchokwadi, zvipfeko zvavo zvakasiyana, uye nyika zhinji dzine zvitaera zvadzo nehukuru. Kutora gauni revarume rinowanzodaidzwa kuti "Gondola", hapana asingasviki gumi nemaviri masitaera akazara, akadai seSaudi, Sudan, Kuwait, Qatar, UAE, nezvimwewo, pamwe neMoroccan, Afghanistan masutu nezvimwe. Izvi zvinonyanya kubva pachimiro chemuviri uye zvido zvevanhu vari munyika dzavo. Semuyenzaniso, maSudan anowanzo kureba uye akafuta, saka maSudan Arabic hanzu dzakasununguka uye dzakafuta. Kune zvakare tirauzi jena rekuSudan rakaita sekuisa homwe mbiri hombe dzedonje. Yakasonanidzwa pamwe chete, ndinotya kuti zvakawandisa kuti veJapan yokozuna-level sumo wrestlers vaipfeke.
Kana dziri nguwo nhema dzinopfekwa nevakadzi vechiArab, zvitaera zvavo zvakatowanda zvisingaverengeki. Sezvipfeko zvevarume, nyika dzine maitiro adzo akasiyana uye hukuru. Pakati pavo, Saudi Arabia ndiyo inonyanya kuchengetedza. Pamwe chete nemidziyo inodiwa senge turban, sikavha, vheiri, nezvimwe, inogona kuvhara munhu wese zvakasimba mushure mekuipfeka. Kunyangwe vakadzi vechiArab vanoberekerwa kuda runako vachirambidzwa nemirairo yeIslam, havabvumidzwe kuratidza miviri yavo yejade pamadiro, uye havana kukodzera kupfeka majasi akajeka, asi hapana anogona kuvamisa kubva kuruka maruva matema matema kana kupenya. maruva akajeka pazvipfeko zvavo zvitema (izvi zvinoenderana nemamiriro ezvinhu enyika), uye havagoni kuvadzivisa kupfeka zvipfeko zvakanaka munguvo nhema.
Pakutanga, takafunga kuti iyi nguo yevakadzi nhema inonzi "Abaya" yakanga iri nyore uye iri nyore kugadzira, uye yakanga isingadhuri. Asi mushure mekutaurirana nenyanzvi, ndakaona kuti nekuda kwemhando dzakasiyana dzemachira, kushongedzwa, kugadzira, kurongedza, nezvimwe, mutengo wemutengo wakakura kwazvo, kure nekufunga kwedu. MuDubai, guta rekutengeserana reUnited Arab Emirates, ndakashanyira zvitoro zvembatya dzevakadzi zvepamusoro kakawanda. Ndakaona kuti magauni echikadzi matema aivapo aidhura chaizvo, rimwe nerimwe richiita mazana kana zviuru zvemadhora! Nekudaro, muzvitoro zvechiArab zvenguva dzose, jasi jena nenguwo nhema hazvigone kuva muchitoro chimwe chete.
MaArabu anga akapfeka nguwo dzechiArab kubvira vachiri vadiki, uye ikoku kunoratidzika kuva rutivi rwedzidzo yechinyakare yechiArab. Vana vadiki vanopfekawo nguwo diki chena kana nhema, asi hadzina nzvimbo zhinji, saka haugone kuita kunze kwekudzitarisa. Kunyanya apo mhuri dzeArabhu dziri kunze kwezororo, pachava nemapoka evana vanomhanya-famba vakapfeka nguo nhema uye chena, izvo zvinopa zororo nzvimbo yakajeka nekuda kwezvipfeko zvavo zvakasiyana. Mazuva ano, nekukura kunoenderera mberi kwenzanga, maArabu echidiki anowedzera anoda masutu, shangu dzematehwe nembatya dzenguva dzose. Ikoku kunogona kunzwisiswa sedenho kutsika here? Zvisinei, chinhu chimwe chine chokwadi. Muwadhiropu yemaArabu, pachagara paine hembe shoma dzechiArab dzavakapfuura nemumazera.
MaArabu anofarira kupfeka nguwo refu. Kwete vanhu vari munyika dzeGulf chete vanogara vakapfeka nguwo, asi vanovadawo mune dzimwe nzvimbo dzechiArab. Pakutanga kuona, jasi reArabia rinoratidzika kunge rakafanana uye rakafanana pakuonekwa, asi chaizvoizvo rinonyanya kufadza.
Hapana mutsauko pakati penguo uye zvigaro zvakaderera. Dzinopfekwa nevanhuwo zvavo uyewo dzinopfekwa nevakuru vakuru vehurumende pavanenge vachienda kumabiko. MuOman, gown nemapanga zvinofanirwa kupfekwa panguva dzepamutemo. Zvinogona kutaurwa kuti jasi rave kunze-uye-kunze kwechiArab chipfeko chenyika.
Nguo yacho inodaidzwa zvakasiyana munyika dzakasiyana. Semuenzaniso, Egypt inoidana kuti "Jerabiya", uye dzimwe nyika dzeGulf dzinoidaidza kuti "Dishidahi". Kwete chete kune kusiyana kwemazita, asi zvipfeko zvakasiyanawo mumutauro uye basa. Nguo yeSudan haina collar, bhurugwa iri cylindrical, uye kune homwe kumberi nekumashure, sekunge homwe mbiri dzedonje dzakasonanidzwa pamwechete. Kunyange Japanese sumo wrestlers vanogona kupinda. Nguo dzeSaudi dzine mitsipa yakakwirira uye refu. Sleeve yakashongedzwa nemaraini mukati; Nguo dzeEgypt-style dzinotungamirirwa nemakororo akaderera, ayo ari nyore uye anoshanda. Inonyanya kukosha kutaurwa ndeye Omani jasi. Chimiro ichi chine tambo yakareba 30 cm nzeve yakarembera kubva pachifuva pedyo necollar, uye kaburi kadiki kuzasi kwenzeve, kunge calyx. Inzvimbo yakatsaurirwa kuchengetedza zvinonhuhwirira kana kupfapfaidza pefiyumu, inoratidza runako rwevarume veOmani.
Nekuda kwebasa, ndakasangana neshamwari dzakawanda dzechiArab. Muvakidzani wangu paakaona kuti ndaigara ndichibvunza nezvenguo, akatanga kuzivisa kuti nguo zhinji dzeEgipita dzinobva kuChina. Handina kuzvitenda pakutanga, asi pandakaenda kune zvitoro zvikuru zvishoma, ndakaona kuti dzimwe hembe dzacho dzakanga dzakanyorwa mashoko okuti “Made in China” padziri. Vavakidzani vakati zvinhu zveChinese zvakakurumbira muEgypt, uye "Made in China" yava chiratidzo chemufashoni. Kunyanya panguva yeGore Idzva, vamwe vechidiki vanotova nezviratidzo zve "Made in China" pahembe dzavo.
Pandakatanga kugamuchira nguo kubva kumuArab makore mazhinji apfuura, ndakaiedza mumba kwenguva yakareba, asi ndakanga ndisingazivi kuti ndingaipfeke sei. Pakupedzisira akapinda nomusoro wake ndokupfekedza nguo yake pamuviri wake kubva kumusoro kusvikira pasi. Mushure mekuisa iyo yekuzvimiririra mugirazi, inonyatso ine kuravira kwechiArab. Ndakazoziva gare gare kuti kunyange zvazvo nzira yangu yokupfeka isina mitemo, haina kunyanya kunyanyisa. MaEgypt havapfeki nguwo zvine hungwaru semakimono ekuJapan. Kune mitsara yemabhatani pakora uye maoko ezvipfeko. Unongoda kusunungura mabhatani aya paunoaisa woabvisa. Iwe unogona kunyange kuisa tsoka dzako mujasi kutanga uye kuipfeka kubva pasi. MaArabu akafuta uye anopfeka nguwo dzakatwasuka dzakakora sedzekumusoro nezasi, dzinogona kuvhara chimiro chemuviri. Maonero edu echivanhu maArabu ndeekuti murume akachena asina musoro, uye mukadzi akapfeka nguwo nhema akavhara kumeso. Chokwadi ichi chipfeko chekare cheArab. Nguo chena yemurume uyu inonzi "Gundura", "Dish Dash", uye "Gilban" muchiArabic. Aya mazita mazita akasiyana munyika dzakasiyana, uye chinhu chimwe chete, Gulf Izwi rekutanga rinoshandiswa munyika, Iraq neSyria shandisa.
Nguva yekutumira: Oct-22-2021
Best Muslim Cap, Mens Mosque Hats, Muslim Cap Black, Hijab Dupatta, Ciput Hijab, Wool Kufi,